प्रचण्ड बहुमतले बिजयी भएका सांसद रेशम चौधरीलाई गोडामा नेल ठोकेर,उपचार - MONGOL KHABAR
प्रचण्ड बहुमतले बिजयी भएका सांसद रेशम चौधरीलाई गोडामा नेल ठोकेर,उपचार
काठमाडौ । कैलालीको टीकापुर क्षेत्रबाट प्रचण्ड बहुमतले बिजयी भएका सांसद रेशम चौधरीलाई गोडामा नेल ठोकेर, मेरुदण्डको उपचारका लागि बीर अस्पतालमा राखिएकोछ । पत्रकार अनन्त अनुरागको फेसबुक स्टेटस अनुसार, चौधरीलाई नेल ठोकेर राखेको उनले देख्न सकेनन । उनको आँखाबाट आँशु आयो । त्यसपछि उनले कुनै तरीकाले प्रधानमन्त्री केपीओलीसम्म यो खबर पुर्याए ।
प्रम ओलीले मुख्य सचिवलाई चौधरीलाई ठोकिएको नेल खोल्न लगाउने मात्र होइन, नेल ठोक्नेलाई कारवाहीगर्ने आदेश पनिदिए । सांसद रेशम चौधरीको गोडामा ठोकिएको नेल खुल्यो कि खुलेन ? त्यो थाह छैन । नेल खोलिएको तस्वीर सामाजिक सन्जालमा देख्न पाइएको छैन । स्वयं प्रम ओली नै लागेपछि नेल त पक्कै खोलियो होला । नेल ठोक्नेलाई कारबाही हुने नहुने त्यो अर्को पाटो हो ।
कैलाली जिल्लाको रमणीय शहर टीकापुरमा जे भयो त्यो राज्य र नागरिक दुबैका लागि घातक थियो । त्यो दुःखद घटनाको पृष्ठ भूमिमा रेशम चौधरीलाई देखेको छ राज्यले । यो पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो भन्न धकमान्नु पर्दैन । किनभने, प्रदर्शन जुन तहको थियो त्यसलाई संगठित गर्ने ताकत थिएन रेशमको । आन्दोलन स्वतस्पूmर्त थियो ।
कैलालीको थारु समुदाय नयाँ संविधानमा आफनो अधिकारको सुनिश्चितता खोज्दै थिए । त्यही मौकामा संघीयताको प्रश्नमा पहाडी र थारु समुदायका बीच चर्को विवाद भयो । यही विवादले आन्दोलनलाई डरलाग्दो बनायो । पूरै टीकापुर शहर ध्वस्तभयो । हिंसक विवादका पीडित थिए थारु र पहाडी बराबर । तर, राज्यले आफना प्रहरी सहित बच्चाको कारुणिक मृत्युको कारण थारुलाई ठहर्यायो । रेशम चौधरी माथि टीकापुरमा जम्माभएको मानव सागरलाई भडकाएर हिंसात्मक आन्दोलन गरेको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलाइयो । रेशम चौधरी र उनका साथीबिरुध्दको आरोपमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन र इष्र्यालु राजनीतिक ब्यक्तिहरुको बदलाको भावनाले काम गरेको थियो ।
जिल्लाअदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको निर्देशित फैसला सुनायो । त्यही आरोप र अभियोगको सजाय भोग्न अहिले उनी जेलमा छन । रेशम चौधरी माथि एउटा मात्र अभियोग लगाइएको छैन । उनको टाउकोमा १२ बटा मुद्दा छन । उनले जिल्ला अदालतको फैसलाका बिरुध्द उच्च अदालतमा अपील गरेका छन । त्यसको फैसला कहिले हुने हो ? कसैले भन्न सक्दैन । रेशम चौधरीले जेलमा बसेर चुनाव लडे राष्ट्रिय जनता पार्टीको उम्मेदवारका रुपमा । प्राप्त जानकारी अनुसार, उनको उम्मेदवारी राजपा नेता राजेन्द्र महतोको पहलमा भएको थियो ।
बन्दी सांसद चौधरी बिरामी परेर अस्पताल बस्दा राजपाका नेताहरुले उनको कुशल क्षेमको जानकारी नलिनु सुसभ्य कुरा पक्कै होइन । चुनावमा टीकापुरवासीले चौधरी प्रति बिश्वास प्रकट गरे । उनी सर्वाधिक भोटले बिजयी भए । तर, संसदमा शपथ ग्रहण गर्न पाएनन । पछि २०७५ पुस १ गते उनको शपथ ग्रहण भयो सरकारको आफनै राजनीतिक आबश्यकताले । त्यतिखेर प्रमओलीको सरकारमधेशको समस्या समाधानगर्न कम्मर कसेर लागेको थियो ।
सरकारले देखेको थियो, सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सकियो भने मूलधारका मधेशी दलका लागि यो चुनौतिहुनेछ । सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन बालुवाटारमा बोलाइयो । त्यसको चेक भल्वका रुपमा रेशम चौधरीलाई संसद भवनमा संसद सदस्यको शपथ लिन लगाइयो । सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने आवश्यकता नदेखेको भए सम्भवतःरेशमको शपथहुने थिएन ।
“नयाँनेपाल”बनाउने सन्दर्भमा तीन तहको चुनाव भयो देशमा । तर, यत्रो महाअभियानमा सहभागी भएर पनि टीकापुर राज्य विहिन भयो । टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै उक्साहटमा भएको आरोप प्रशासनले लगाएको छ । तर, त्यति ठूलो भीडलाई निर्देशित र नियन्त्रितगर्ने शक्ति रेशममा हुने कुरै होइन । भीडको मनोविज्ञान कसैले बुझन सक्दैन । टीकापुर आन्दोलनका क्रममा प्रहरीहरु मारिएका हुन । तर, उनीहरु मारिनुको मुख्य कारण आन्दोलनकारी थिएनन । प्रहरीका जो हाकिम थिए उनको आफनै उत्ताउलो ब्यबहारले उनको ज्यान गएको थियो ।
यो कुरा त्यतिबेला नै धेरै अनुभवी सुरक्षाकर्मीले बताएका हुन । अब राज्य घटनाको तल्लो तहमा नपुगी एकोहोरो बयानका आधारमा त्यही घटनाको बदला लिइ रहेको छ रेशम चौधरी सहित दर्जनौं थारु युवाहरुसंग । यो नै बिसंगत परिस्थिति हो टीकापुरका लागि पनि र देशका लागि पनि । यो परिस्थितिको छिनोफानो राजनीतिक रुपमा हुनुपर्दछ । फौजदारी फैसलाले टीकापुरका पीडित किसानको दुखेको घाउ निको पार्न सक्दैन । यो सत्यलाई राज्यले अंगीकार गर्नुपर्दछ । ?
राज्यले यति बुझनु पर्दछ कि त्यो आन्दोलनताका थारु र पहाडीका बीच जुन अबिश्वासको बीउ रोपिएको थियो त्यो बिरुवा अहिले झांगिएको छ । थारु समुदायका कति परिवारको धन सम्पत्ति ध्वस्त भयो सरकारले त्यसको लेखा जोखा गरेको छैन । आन्दोलनको त्यो चापमा हजारौं युवाले सीमावर्ती भारतमा लुकेर ज्यान जोगाएका थिए । सयौं माथि ठाडो वारेन्ट काटिएको थियो । देशमा धेरै घटना भएका छन ।
टीकापुर भन्दा विभत्स घटना भएका छन । टीकापुर घटनाको प्रभाव किन ब्यापक छ भने यसको सरोकार थारु जाति संग जोडिएकोछ । थारु जाति मात्र होइन । यो सारै इमान्दार, देशभक्त र कर्मबीर जाति हो । थारु जाति जहिले पनि सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ । सरकारका निकायहरु,जसलाई हामी आधिकारिक मान्दछौं । उपेक्षित थारुहरु प्रायःमनको कुरा मनमा राखेर बस्दछन । उनीहरुको मौन भाषा बुझनु असजिलो छैन । उनीहरुको खाना, कपडा र दैनिक प्रयोगका बस्तुहरुले उनीहरुको अवस्थाको पोल खोल्दछ ।
संस्कृतिका धनी थारु जाति सबै जातिका मानिस संग बिश्वास र भरोसाको सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । जति बढी उपेक्षित हुन्छ त्यति नै बोल्न डराउँछ यो जाति । यो पूरै जातिलाई आशाहीन अवस्थाले ब्याकुल बनाएकोछ । आपूले पाउनु पर्ने राजनीतिक हैसियत समेत पाउन नसकेका थारु समुदाय बिचलित छ भने त्यसको मूलबिन्दू यही हो । प्रम ओली थारु जातिका समस्या समाधान गर्न उत्सुक छन भने उनले रेशम चौधरीलाई जेलबाट मुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ ।
टीकापुर घटना आपराधिक थिएन । आन्दोलनमा मानिस मर्दछन । त्यसलाई बहाना बनाएर, बदलाको भावनाले ओतप्रोत भएर सामाजिक र राजनीतिक बिषमताको अन्त्य हुँदैन । प्रदेशको निर्माण गर्दा नेताहरुले ज्ञान र बिबेकको होइन, आफनै स्वार्थको सुरक्षा गरेका छन । प्रदेश निर्माणका समस्या अझ बाहिरिन बाँकी छन । सरकारले यो कुरा बुझनु पर्दछ । ठिक हो, सरकारलाई दुईतिहाईको समर्थन प्राप्त छ । तर जनता त्यो दुईतिहाई बाहिर पनि छन । त्यो बुझेमा सबैको भलो हुनेछ ।